स्कटल्याण्डमा भुवनसँगै के गर्दैछिन् प्रेमिका जिया ? | We Nepali
स्कटल्याण्डमा भुवनसँगै के गर्दैछिन् प्रेमिका जिया ?
२०७४ माघ १६ गते १६:२२
लन्डन । नायक भुवन केसी रोमान्टिक नेपाली अभिनेता मानिन्छन् । अहिले उनको होम प्रोडक्सन सिनेमा ‘कृ’ सुटिङ भइरहेको छ । नेपालमा सिनेमाको सबै सुटिङ सकेको भएपनि एउटा गीत भने बाँकी नै छ ।
त्यसैको छायाँकनका लागि भुवन केसी उनका छोरा तथा नायक अनमोल केसी, नायिका अदिती बुढाथोकीलगायतका टिम स्कटल्याण्ड पुगेको छ । भुवनको स्कटल्याण्ड जाने टिममा निर्माता सुवास गिरी र क्यामेराम्यान पुरुषोत्तम प्रधान पनि छन् ।
रमाइलो त के भने भुवनले उनकी प्रेमिका भनिने जिया केसीलाई समेत आफूसँगै स्कटल्याण्ड लगेका छन् । स्रोतकाअनुसार सिनेमामा जियाको कुनै भूमिका छैन् । तापनि भुवनले आफूसँग जियालाई स्कटल्याण्ड घुमाउन लगेका हुन् । तर, हालैको एक अन्तवार्तामा भने उनले जिया आफ्नी प्रेमिका नभएको स्पष्टोक्ति दिएका थिए । त्यसो भए किन लगे त जियालाई स्कटल्याण्ड ?
यसअघि भुवनले स्कटल्याण्ड जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा क्यामराबाट लुकिरहेकी जियालाई मिडियाको अगाडि ल्याएर सहज बनाएका थिए । भुवनले स्कटल्याण्ड पुगेपछि पनि त्यहाँ फोटो खिचेर सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा जिया र ‘कृ’ की नायिका अदितीको बीचमा भुवन उभिएका छन् ।